Ubani owahambisa ushizi wami? - I-Geofumadas
Ephreli, 2009 Geospatial - GIS, I-GvSIG, IntelliCAD, GIS ezininginingi, Microstation-Bentley, egeomates yami, qgis
Ngiyathanda kakhulu i-Geoinformatics, ngaphandle kokuba umagazini onomusa omuhle wezinto, okuqukethwe kuhle kakhulu ezindabeni ze-geospatial. Namuhla inguqulo ye-Ephreli isimemezelwe, kusukela lapho ngithathe khona imibhalo iqokonyiswe ngokubomvu ukubagqugquzela ekufundeni okunomsoco.
En izinguqulo zangaphambilini Ngenze ukubuyekeza, namuhla ngithathile njengokuthunyelwe kwendaba efushane kodwa ejulile ngokumelene nokumelana nokuguqula okukhona okwenzeni ukuxhuma kumithombo yomthombo ovulekile. Isekelwe kuleyo ndaba endala yegundane eyayiseduze ukufa ngoba ushizi lakhe seliphelile futhi lifuna omunye umthombo wawuphikisana nemigomo yakhe; Ngicabanga nje lokho "Babedlulise ushizi."
Futhi yilokho izikhathi eziningi labo abazama ukukhuluma ngamagama athi "gpl", "umthombo ovulekile", "mahhala", "gnu" noma okufanayo kufana nokubonakala njengabafokazi be-capsule isikhala nelihlo ebunzini. Sijwayele ukubona iWindows logo ukuthi yonke into engasebenzi kulesi dinosaur ibonakala iyinkimbinkimbi, izibalo zibonisa, abantu bathanda i-Inthanethi Explorer ukuya e-Mozilla, ukunikeza isibonelo. Kulomagazini we-Geoinformatics siyaqhubeka nokukhuluma ngobuchwepheshe obuvulekile, kulokhu I-PostGIS kanye nekhono labo lokusebenza ngolwazi, esiyicabanga ukuthi ngumkhankaso omuhle ngoba baboniswe ngaphambilini gvSIG y GIS Quantum.
Eminyakeni yamuva ngiye ngenza ukuhlolwa ngisebenzisa izinhlelo "ezingavumelani" ezifana nokuthi ezininginingiI-Microstation gvSIG e IntelliCAD; imiphumela ibe yinto efanayo futhi ingcono, kodwa lokhu kungenze ukuba kubonakale sengathi "kunzima". Ngiyavuma, ngivame ukuba khona, kodwa kubalulekile ukucabangela ukuthi kulokhu kuphila kufanele ubukeke emisha, uma nje engekho okwedlulele kuthathwe izinwele; Ngithanda umhleli ka-Eric Van Rees lapho efakazela "Yini i-Google Earth engayicabangela, mhlawumbe ngaphansi komhlaba".
Ngiyazi, izwe le-PC ku-Linux ngeke lishintshe eminyakeni eminingi futhi mhlawumbe ayikho, kodwa ubuchwepheshe bokuvula umthombo yiyona indaba edlala emazweni amaningi ngamandla amakhulu futhi ngaphandle uma kuvela amamodeli amabhizinisi amasha ukuthi anqobe inkinga enkulu umjikelezo, isikhathi sizosiqinisekisa. Uma kungenjalo, njengomqeqeshi webhola lezinyawo, sithola ulwazi.
Enye yalezi zinsuku abantu kumele baqonde ukuthi awukwazi ukuphila ngokuqhaqhazela i-AutoCAD, ukuthi i-IntelliCAD inenani elincane kakhulu futhi i-QCad ibe nenani elingokomfanekiso; Yiqiniso, uma unayo imali nodumo okumelwe uthenge kusuka ku-AutoDesk. Kudingeka futhi uqonde ukuthi omasipala be-300 abakwazi ukukhokha ilayisensi ye-ArcGIS Server ye $ 35,000, hhayi ngisho nomuntu wonke okuyidinga (noma ezinye izandiso), kodwa kungenzeka ukuthi enze okufanayo (noma ngaphezulu) ezinye izindlela ukusetshenziswa kwezomnotho njenge-Manifold, i-Global Mapper, i-GvSIG, i-QGis noma i-Grass. Ngiyathanda ukucatshangwa nguJames Fee okusho ngokumangalisayo "Ukufinyelela nge-ftp kungcono kakhulu ongakwenza? "
Ekugcineni, mhlawumbe sichitha isikhathi kanye namathele sikhuluma ngakho, kungenzeka ukuthi, kodwa labo abazama izindlela ezintsha zokwenza okufanayo ngentengo ephansi bathola inzuzo yokufunda okuningi ngokwabo. Ngithanda ukuphikelela kweGeoinformatics kulolu hlelo, ngokwenza inkolo yokufunda okuzifundisayo njengesidingo somuntu.
Ukuthi lobu buchwepheshe bukhona phakamisa, akungabazeki.
O, bheka umagazini, okhuluma ngawo:
I-Trimble Juno SC
I-GIS imfundo kanjani ezikoleni?
I-CityGML, indinganiso ekusebenzeni
Imikhuba emihle ekusetshenzisweni kwe-GIS, incwadi entsha ye-ESRI
Ukuhlanganiswa kwe-GIS ne-GRID ekulawulweni kwezinhlekelele
Thumela Previous«Langaphambilini Ingabe ibhulogi ingalahlekelwa umqondo wayo?
Post Next Inkambo yeCadastre, usuku lokuqalaOlandelayo "